musha nyika dzakabatana WWE Superstars Lars Sullivan Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican wrestler ine zita remadunhurirwa “Chidzidziso".
Yedu shanduro yeLars Sullivan's Biography uye Childhood Nyaya inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Lars Sullivan Biography - Kubva paUdiki hwake Makore kusvika panguva yemukurumbira.
Hongu, munhu wose anoziva wechimiro chake chikuru uye maoko makuru. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Lars Sullivan's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Lars Sullivan Nyaya Yemwana - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga kubva, Dylan Miley akazvarwa musi we 6th waJuly 1988 kuWestminster, kuColorado, United States. Akazvarwa nevabereki vasingazivikanwi nezvake panguva yekunyora iyi bio.
Lars Sullivan akaberekerwa vabereki vanozivikanwa zvishoma nezvake.
Lars Sullivan Mhuri Mavambo:
IAmerica yenyika yakachena yemadzinza neIrish roots yakamutswa panzvimbo yaakaberekerwa muColorado apo yakakurira pamwe chete nehanzvadzi dzacho dzisati dzamboonekwa naye saJune 2019.
Lars Sullivan akarererwa kuWestminster muColorado.
Kukura muColorado, mudiki Sullivan aive mwana ane hutsinye akakura nekukurumidza kupfuura vezera rake. Saka, aive nemuviri unotyisa uyo pakutanga wakarova vazhinji sechinhu asi kukura kwakajairika.
Zvishoma zvaizivikanwa kuti kukura kwaSullivan mudiki kwakanga kusina kujairika.
Mudiki anga ari muchokwadi, aine nyaya ne-over-secretion yepituitary gland izvo zvakaita kuti aite seasina kumira mushe ezve freak sized body features.
Lars Sullivan freak saizi yemuviri maficha anodzokera kumazuva ehudiki hwake.
Lars Sullivan Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Sullivan akaendesa saizi yake hombe iyo yakapfuudza fomu yemitambo mukutamba nhabvu yeAmerica uye aive akaiswa mari kwazvo muchikoro chepamusoro nhabvu iyo yaakazvitsanangura se "sekondari nhabvu joki".
Post Post high school endeavors vakaona Sullivan chibvumirano chinonyanya kukosha pakuvaka muviri nemafungiro ekuumba hupenyu hwake hukuru, basa raakazvitsaurira kunyange paaipinda chikoro chekurwisana kuDenver.
Lars Sullivan akaiswa mari zvakanyanya mukuvaka muviri kubva pamashure-kusekondari mazuva.
Lars Sullivan Biography - Yekutanga Basa Roupenyu Uye Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Yakanga iri pachikoro chetsimba muDenver apo Sullivan akadzidziswa naBobby Lashley uyo akafadzwa netarenda mbishi yaive nemutambo wekurwa.
Achikoshesa tarenda raSullivan, Lashley akadhonza tambo dzakagadzira maneja eWWE kuhaya Sullivan.
Bobby Lashley akashandisa kubatana kwake kuti aite Lars Sullivan mukurwa.
Nekudaro, Sullivan akasaina kuWWE mu2013 uye akadzidziswa zvehunyanzvi kuWWE Performance Center.
Akaita basa rake rekutanga nekukunda Marcus Louis mumutambo wekuratidzira kuWrestleMania Axxess mu2015 uye akaenderera mberi nekuita zvekuonekwa pazviitiko zveNXT zviripo pakati pa2015-2017.
Makore maviri ayo Sullivan akapedza paNXT aive nguva yakaoma kwazvo yebasa rake rekutanga. Akatanga pamakumbo asina kunaka nekuita dhipatimendi rake reterevhizheni naMicheal Blais mukurasikirwa kwekuedza kuboka DIY.
Saizvozvowo, Sullivan akaenderera mberi kupinda mumishandirapamwe yemazita mazhinji eNXT asi akatadza kuhwina chero panguva yake aine zita.
Lars Sullivan zvakatadza kutadza kuhwina chero zita reNXT panguva yake neiyo brand.
Lars Sullivan Biography - Simuka Kukurumbira Nyaya:
Achienderera mberi, Sullivan akashevedzwa kukambani nyowani yeWWE munaNovember 2018 uye zvinoshamisa kuti akaita mwedzi wake wekutanga mushure me2019 panguva yaApril 8 episode yeRaw nekurwisa WWE Hall yeN Famer Kurt Angle.
Lars Sullivan akaita yake WWE Main Roster kutanga nekurwisa Kurt Angle.
Mavhiki anotevera akaona Sullivan asingatyi kurwisa vamwe veWWE veterans kusanganisira The Hardy Boyz naRey Mysterio asati ava chikamu cheSmackDown brand panguva ye 2019 Superstar Shake-up muna April. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lars Sullivan Hukama Hupenyu Hupenyu Chokwadi:
Lars Sullivan achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Makore mazhinji asati ave mutsimba, Sulivan aibatanidzwa mune yekudanana nemumwe musikana wepachikoro chepamusoro.
Zvisinei, ivo vaviri vakaputsa nekuda kwekuda kwaSullivan nekurwa sezvo iye anonzi akasarudza kuenda kune imwe yeEECW's One Night Stand PPV muNew York City, panzvimbo yekushandisa nguva nemusikana wake panguva yekuzvarwa kwake.
Lars Sullivan akanyora nezve nhoroondo yake yekufambidzana neWWE Magazine muna 2008.
Kufambira mberi kusvika munaJune 2019, hazvizivikanwe kana Sullivan aive nevanasikana vashure, uyewo hapana mukadzi akaonekwa semudzimai wake. Saizvozvowo, hapana mabhuku anoratidza kana ane mwanakomana kana mwanasikana (s).
Chishoma chaizivikanwa nezve hupenyu hwehukama hwaLars Sullivan munaJune 2019
Lars Sullivan Hupenyu Hwemhuri:
Lars Sullivan anobva kumhuri shomanana inozivikanwa. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaLars Sullivan naamai:
Sullivan akaberekerwa vabereki avo vachiri kuzozivikanwa nekuda kwezvikonzero zvakati panguva yekunyora. Kutanga, mutsimba haana nhoroondo nekurwira kuzvikwidziridza kwakazvimirira asati ajoina WWE.
Uye haana kuhwina chero mukwikwidzi kubvira paakatanga kuita terevhizheni kutanga paNXT muna Kubvumbi 2017. Nekudaro, pane zviripo zvisipo zviripo zvine chekuita nehupenyu hwake hwepakutanga uye nhoroondo yemhuri.
Zvisinei, Zvinogona kutora nguva refu isati yapihwa ruzivo nezve amai vaSullivan nababa pamusoro kunyanya kana akahwina kuhwina mukombe.
Lars Sullivan akarerwa nevabereki vanozivikanwa zvishoma nezvake.
Nezve vana vaLars Sullivan uye Hama:
Sullivan zvishoma zvishoma zvakazivikanwa zvinowedzera kune ruzivo pamusoro pehama dzake.
Iko hakuna zvinyorwa zvevakoma vake nehanzvadzi, kana nasekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya vake havana kuzivikanwa. Saizvozvowo, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini nanasekuru vanoramba vasingazivikanwe zvakanyanya
Lars Sullivan Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Lars Sullivan abike ... Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, Sullivan's persona isanganiswa yeCancer Zodiac maitiro.
Iye anogadzira, akatsiga, anotaurwa zvakanaka uye haatombo zarura ruzivo nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Nezve zvido zvaSullivan uye zvekuzvivaraidza nazvo, anoda kuvaka muviri, kuenderana nemitambo yenhabvu uye kushandisa nguva neshamwari.
Lars Sullivan Mararamiro Chokwadi:
Kukosha kwaSullivan kuri kuongororwa panguva yekunyora apo kwakabva hupfumi hwake hushoma hunozivikanwa hunobva muhoro iri kuwedzera yaanogamuchira semurwi ari kukurumidza kukwira.
Nekudaro, anorarama hupenyu hwekuchengetedza paanogara paCleveland Ohio. Ichokwadi kukosha kweimba yaSullivan kuCleveland ichiri kuzivikanwa apo pasina zvinyorwa zvemotokari yake yekuunganidza.
Lars Sullivan Untold Chokwadi:
Kuputira mharidzo yedu Lars Sullivan yehuduku uye biography pano zvinyorwa zvishoma zvisinganzwisisiki zvisingambowanzobatanidzwa muhupenyu hwake.
Lars Sullivan anowanzoita anxiety attack, mamiriro akaita kuti anonoke kutanga kwake kwemwedzi mushure mekushevedzwa kunzira huru yeWWE.
Anongova nechimwe chete chinyorwa pafudzi rake panguva yekunyora.
Sullivan haana kusiya chizivo pamusoro pechitendero chake, saka anotarisa pane nyaya dzekutenda zvisingazivikanwi.
Haana kupiwa kusvuta, uyewo haana kutarirwa kunwa.
Lars Sullivan Biography Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Lars Sullivan Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira tichikupa iwe Biography Nyaya yeWWE Stars.